Dhaqan, farshaxan iyo isboorti | Samfunnsfag 5.klasse somali
» Giriiggii hore » Dhaqan, farshaxan iyo isboorti
Hore waxaad u baratay in dadka Giriiggu badankoodu lahaayeen addoon u qabata hawsha guriga. Tani waxay dadka xorta ah siisay waqti badan oo firaaqo ah oo ay ku samayn karaan waxyaalo kale, tusaale ahaan inay u qabtaan xaflado waaweeyn ilaahyada kala duwan. Sannad kasta waxa la qaban jirey xaflad weyn oo heeso, qoob ka ciyaar iyo riwaayado ah oo lagu sharfayo ilaaha khamriga, Diyunisus. Riwaayaduhu waxay badanka ku saabsanaayeen ilaahyo iyo halyeeyo shacabku hore u yaqaaney.
Masraxa waxa dhacaysay in shacabku qosol la dhawaaqaan ama aad uga murugoodaan oo ilmadu ka qubato. Giriiggu waxay ku hawlanayeen in qofku uu ku noolaan karo sheekooyin ba’an, balse uu qosol iyo farxad na dareemi karo.
Masraxa waxay raggu xidhan jireen weji-shareer si ay u tusaan dareen (shucuur ) kala duwan ClipArt
Riwaayadaha murugada lehi waxay ku saabsan yihiin geeri, shillal iyo aargoosi, sidaas ayaa loogu bixiyey musiibooyin. Qaybaha ku jeesjeesa dadka iyo ilaahyadana, si dadku ugu qoslaan, waxa loo bixiyey majaajillo.
Dumarka looma oggolayn inay jilayaal noqdaan, sidaas darteed door kasta rag weji-shareer xiran baa jilli jirey.
Giriiggu waxa kale ooy aad ugu hawlanaayeen farshaxanka iyo nashqadda dhismayaasha (arkitektur). Dhagax-qorayaashu (billedhuggere) waxay u samayn jireen taallooyin ilaahyaada iyo ciyaartooyda, nashqad-dhiseyaal iyo farsamoyaqaanno ayaa dhisay macbadyo waaweyn oo qurux badan, dheri-sameeyayaasha (pottemakere) ayaa sameeyey dhallooyinka (krukker) ugu fiican iyo dheri-ubaxeedyo (vaser) oo waxay rinjiyeeyeen sawirro ilaahyo iyo dad. Taallooyinka iyo macbadyada ugu fiicnaa waxa laga sameeyey marmar cad waxaana lagu rinjiyeeyey midabyo xooggan.
Diskas (qars) tuure Olambikada
INimanka ciyaartooyga ah waa qaawanaayeen, oo waxay marsan jireen saliid, markay tartantan ku jiraan. Saliidda waxay isu marin jireen si ay billicdooda u wanaajiyaan, iyo inaan si fiican loo qaban markay legdamayaan. Kuwa feedhtamaya, waxay gacmahooda ku wareejin jiren xadhko maqaar ka samaysan si feedhkoodu waxyeello dheeraad ah u gaystaan, kuwa boodada dheer ka qaybgelayaaa waxay gacmaha ku xidhan jireen miisaan si ay sida ugu dheer u boodaan.
Tartamayaal Giriig ah oo dheri-ubaxeed lagu sawiray
Billadda koowaad ee Olembikada waxay ahayd sharafta ugu sarreeysa ee ciyaartooy gaadhi karo. Qofka ku guulaystaa madaxa loo saari jiray taaj caleen saliid saytuuna. Markuu ku soo laabto dawlddiisa yar, waxaa loo soo dhoweyn jirey sidii halyay, xaflad weynna waa la qaban jirey. Abwaanno ayaa heeso u samayn jirey guusha uu soo hooyey, suuqanna waxaa looga taagi jiray taallo. Intaas waxa dheer oo laga siin jiray xarunta degmada cunto lacag la’aan ah- noloshiisa oo dhan!
Lama hubo markii ugu horreysay ee ciyaaraha Olembikada la qabtay, balse liistadii ugu horreysay ee dadka ku guuleystay waxay ahayd 776 C.H. Waxaa la qabanjiray afartii sanno hal mar, ilaa qaysar Roomaan ah, Tiyodusiyus I, uu mamnuucay ciyaaraha in la qabto 394 C.H. Markaas ka dib lama qaban wax ciyaaro Olembiga ilaa laga soo gaadhay 1896, markaas oo ka qaybgalayaal waddama badan ka kala yimi isugu yimaadeen fagaare Atiina ku yaal.
shanta goobo ee calanka Olembikadu u taagan yihiin shanta qaybood ee adduunka
waddan kasta oo adduunka ah calankiisa waxa ku jira mid ka mid ah midabyada Olembiga
dabka ciyaaraha Olembikadu waxaa looga shido Olambiya sidii waayadii hore
iminka ay jiraan ciyaaraha Olembiga ee Xagaaga iyo Jiilaalka
laba jeer Noorwey lagu qabtay ciyaaraha Olembikada Jiilaalka; Oslo 1952 iyo Lillehammer 1994
Ciyaaraha Olembikada ee Giriig
Masrax Giriig ah